Obstetricians Ma Gynecologists Job Description / Ọrụ Template Na Ọrụ - JobDescriptionSample.org
Home / Uncategorized / Obstetricians Ma Gynecologists Job Description / Ọrụ Template Na Ọrụ
Jacob June 28, 2016 Uncategorized Nkume a comment 1,807 Echiche
Physicians ndị na-enye nlekọta ahụ ike na ego jikọrọ ọrụ ma ọ bụ onodu na ndị na-ịchọpụta, aka, na-enyere aka igbochi ọnọdụ nke ladies, karịsịa ndị na-akpali ndị amụba usoro. Nwekwara ike na-enye n'ozuzu ọgwụ ndị inyom.
Na-elekọta na adreesị ladies.
Ikpughe usoro ma na-atụle ule results ma ọ bụ nyere usoro ọgwụgwọ iji ahịa.
Aka ọrịa nke nwanyị akụkụ.
Nyochaa peopleA ọrịa na mma na ịtụleghachi ngwọta dị mkpa.
Ọzọ ịwa ahụ dị ka ma ọ bụ imete cesarean akụkụ dị mkpa iji kwagide peopleWI ahụ ike ma na-emepụta na ụmụ ọhụrụ na ntukwasi-obi.
Nye iwu ma ọ bụ ijere usọbọ, ọgwụ, nakwa dị ka akpan akpan ọgwụ na bụ ọzọ na-emeso ma ọ bụ belata ọnọdụ, ọrịa, ma ọ bụ nsogbu.
Nyochaa elele na-elu-ozi, akụkọ, elele uru, ma ọ bụ akwụkwọ nyochaa ọnọdụ nke ime.
anakọta, file, na na-na ịnọgide na-enwe onye data, dị ka ọgwụ na ahụ ike akụkọ, akụkọ, na udomo oro nsonaazụ.
Eduzi ọrịa na obodo ndị mmadụ banyere ọrịa mgbochi, na ọrụ, ọcha.
Kọọ arịa ya ka ọkachamara na bụ ọzọ ma ọ bụ ahụike ọkachamara mgbe ọ dị mkpa.
Lelee na ma ọ bụ na-enye ndị ọzọ dọkịta na-eleta ngwọta.
Immediate na-ahazi omume nke practitioners , ụmụ akwụkwọ, na-enyere aka, ọkachamara, nọọsụ, tinyere ndị ọzọ ike pesonel.
Strategy, itinye, ma ọ bụ dọọ ike ngwa ke corporations, ma ọ bụ agbata banyere ọgwụgwọ na izere ihe mberede ma ọ bụ ọrịa.
Kwadebe govt na ike akụkọ na mkpara testimonials, nnyefe, na-anwụ anwụ, na ọrịa stats, ma ọ bụ ikekwe na ahụ ike na aha nke onye.
Igosi ọmụmụ na-emepụta ma ọ bụ chọpụta agwọ ọrịa, ọgwụ ọjọọ eme ihe, ma ọ bụ usoro iji gbochie ma ọ bụ ịchịkwa ọrịa ma ọ bụ mmerụ.
Agụ ịghọta-ịghọta na paragraf na kere ọdịnaya ọrụ akwụkwọ na ndị yiri.
Active na-ege ntị na-enye dum maara ihe na ndị ọzọ ndị mmadụ na-asị, na-oge na ume na-aghọta ihe ndị a na-kere, ịjụ ajụjụ gbara ajụjụ dị ka kwesịrị ekwesị, na-adịghị interrupting na n'oge na-ekwesịghị ekwesị.
Ịmịpụta-On akwụkwọ ọ bụghị dị ka na-ekwesịghị ekwesị maka chọrọ nke ahịa na-akparịta ụka rụọ ọrụ nke ọma.
Ekwurịta okwu-ekwu okwu na ndị ọzọ na-eso data effortlessly.
Mathematics-Iji maths na-edozi nsogbu.
Technology-Tinye n'ọrụ ngwọta na nkà mmụta sayensị na ụkpụrụ na-edozi nsogbu.
Na-eche na dị oké egwu-Tinye n'ọrụ echiche na ihe mere ịnọ flaws na-eme nke oke nhọrọ, echiche ma ọ bụ ụzọ isi ike.
Active Learning-Ịmara ihe ọmụma ọhụrụ si pụtara banyere ma ugbu ma nwere nsogbu-edozi na mkpebi.
Ịmụta Ụzọ-ahọrọ na tinye n'ọrụ educationANDtutorial na-eru nso na usoro kwesịrị kpọmkwem ọnọdụ mgbe amụta ma ọ bụ izi ihe iseokwu ndị na-adị ọhụrụ.
Nlekota-elekọta / Ịchọpụta arụmọrụ nke ọzọ mmadụ, onwe gị, ma ọ bụ ụlọ ọrụ na-eme ka ndị na ma ọ bụ iri remedial omume.
Social Perceptiveness-Ịnọ maara nke ndị ọzọ’ ọchịchọ mere ha zaghachi ka ha na-eme na ihe ọmụma.
Nchikota-Ịgbazi omume na mmekọrita ndị ọzọ’ omume.
Salesmanship-Ịgba ndị ọzọ ịgbanwe àgwà ma ọ bụ isi ha.
Mediation-Inye ndị ọzọ ịgụnye na-achọ ịghọta variances.
Aka-Ọzụzụ ndị ọzọ HOWTO ka a aga.
Service Usoro-ifịk ifịk achọ azum enyere folks.
Advanced Problemsolving-Ịmata nsogbu na-eme nnyocha jikọrọ eziokwu inwale ma mee ka nhọrọ na mejuputa nhọrọ.
Operations Research-amụ ahịa na ngwá ahịa prerequisites ma na-achọ na-emepụta a style.
Technology Design-Building ma ọ bụ kwado ngwaọrụ na teknụzụ iji aka onye chọrọ.
Equipment Nhọrọ-Ikpebi ngwá ọrụ na akụrụngwa nke ụdị dị mkpa kpọrọ igbu a ọrụ.
Nkeji nkeji-Wụnye ụdị, ngwaọrụ, wires, ma ọ bụ nchịkọta iji mezuo ụdịdị.
Development-Publishing kọmputa mmemme banyere nzube na ọtụtụ.
Operation Ndepụta-Idebe ule, Isi, ma ọ bụ dị iche iche ihe ịrịba ama iji jide n'aka na e nwere a igwe na-arụ n'ụzọ kwesịrị ekwesị.
Operations na emefu-Managing arụmọrụ nke usoro ma ọ bụ ngwaahịa.
Mmezi-eme mmezi nke na-eme na gia na ị na-ekpebi mgbe na ụdị ihe mmezi ga-aghọ dị mkpa.
Nchọpụta nsogbu-ikpebi ihe n'azụ mejọrọ na-arụ ọrụ na ị na-ahọrọ ihe direction na-aga banyere nke a.
Ịrụzi-edozi na omume ma ọ bụ ngwaahịa na-eji ígwè na-na-chọrọ.
Quality-Control Nnyocha-eme ule na nnwale nke ngwaahịa, na enye, ma ọ bụ usoro na-ekpe ikpe ndị magburu onwe ma ọ bụ arụmọrụ.
View na mkpebi-Iche echiche banyere uru na izugbe ahịa nke nzọụkwụ na-nwere ịhọrọ ihe kasị kwesị ekwesị otu.
Analysis-Ịmata ụdị usoro ga-arụ ọrụ na ụzọ oganihu ọrụ, ọnọdụ, tinyere na gburugburu ebe obibi ike mmetụta uru.
Systems Evaluation-ikpebi nzọụkwụ ma ọ bụ na-egosi nke usoro ịrụ ọrụ na ikwu na ihe mgbaru ọsọ nke ngwaọrụ, ezi ma ọ bụ omume dị mkpa aka arụmọrụ.
Time-Management-Ijikwa ndị ọzọ’ oge dị ka nke ọma dị ka oneis onye oge.
Administration nke Financial Resources-Ikpebi otú ego ga-adịghị anya a ga-eji nwere nke rụpụtara, na ahịa n'ihi na ndị a ego.
Administration nke Materials Resources-Inweta ma na-edebe kwesịrị ekwesị ojiji nke ngwaahịa, iche, na mmiri nwere a mkpa na-eme ụfọdụ ọrụ.
Supervision nke Staff Resources-E, akpali akpali, ma na-eduzi mmadụ mgbe ha na-arụ, ịmata ihe ndị kasị mma mmadụ maka ọrụ.
ọzụzụ iru eru Knowledge Iwu
Karịrị 4 afọ, upto 6 afọ na gụnyere,
Rụzuru / agbali – 96.18%
Mkpebi Siri Ike – 94.79%
Ihe Ndị Ọzọ – 96.80%
Social n'ọnọdu – 87.01%
Njikpa onwe – 96.39%
Pressure fọrọ – 97.20%
anọgidesi – 99.20%
Ịmara Ihe – 99.20%
ọganihu – 87.36%
na-eche echiche – 91.53%